Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Tallaalada Booliiska Faransiisku waxay weerareen Maqaayadaha Paris ee madhan
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • France Breaking News • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Maqaayado badan oo lugeynaya ayaa fadhiyay gabi ahaanba madhan maadaama macaamiishoodii caadiga ahayd ay doorteen inay ku fadhiistaan ​​kuraasta dadweynaha bannaanka.
Macron wuxuu fidiyaa kaarka tallaalka makhaayadaha.
Kuwa aan kaarka bixin ayaa la kulma ganaax dhan 135 XNUMX.
Ganaaxa ayaa kor loogu qaadayaa € 9,000 oo ah dambiga soo noqnoqda.
Maanta, xukuumadda Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxay kordhisay waajibaadka 'pass sanitaire' ee muranka badan leh goobaha cuntada, oo ay ku jiraan kuwa bannaanka, iyagoo aan tixgelinayn dhammaadka toddobaadyada mudaaharaadyada ballaaran ee guud ahaan Faransiiska.
Booliiska Faransiisku waxay bilaabeen inay galaan kafateeriyada iyo maqaayadaha waxayna dhaqan geliyaan shuruudda kaadhka tallaalka, taasoo dhalisay in miisaskooda badan ay madhan yihiin inta badan waqtiga qadada ee mashquulka ah, maadaama dadweynaha Faransiisku ay ku caweeyeen kuraasta dadweynaha.
Macaamiisha maqaayadda iyo kafateeriga ee aan lahayn kaarka waxay la kulmayaan ganaax € 135 ($ 158), taasoo u kordhineysa € 9,000 ($ 10,560) dambiga soo noqnoqda.
Waqtigii qadada, makhaayado badan oo lugeynaya ayaa fadhiyay gabi ahaanba madhan maadaama macaamiishooda caadiga ah ay doorteen halkii ay ku fadhiisan lahaayeen kuraasta dadweynaha ee bannaanka - sida ku cad sawirro badan iyo faallooyin lagu dhajiyay warbaahinta bulshada, si kastaba ha ahaatee.
Fiidiyowyada iyo sawirrada warbaahinta bulshada ayaa muujiyey goobo bannaanka ah oo ay ku yaryihiin dadka wax cunaya ee ku yaal Champs Élysées, Paris'waddada weyn.
Waxaa jiray sawirro miisas madhan oo ku yaal daafaha magaalada waqtiyada meelaha noocaan ah ay caadiyan buuxsami lahaayeen.
Grande Brasserie oo caan ah, oo u dhow barxadda Bastille, ayaa waxaa ku lahaa dhowr macmiil gudaha, laakiin qofna kuma jirin barxadiisa.
Baasaboorka, oo uu soo saaray Macron si loogu qasbo tallaallada ka dhanka ah Covid-19, ayaa qasab ku ahaa gelitaanka matxafyada, tiyaatarada filimada, barkadaha dabaasha, iyo goobaha kale tan iyo Luulyo 21-keedii. , kuwaas oo qaarkood ay sameeyeen shaqo joojin ay ku mudaharaadayeen.
Isagoo wajahaya tirada sii kordheysa ee kiisaska COVID-19 oo loo aaneynayo kala duwanaanshaha Delta ee fayraska, mas'uuliyiinta Faransiiska ayaa aad ugu cadaadiyay inay tallaalaan qof walba. Dhanka kale, sameeyayaasha tallaalka Pfizer iyo Casri ah waxay si weyn u kordhiyeen qiimaha tallaalladooda Midowga Yurub.